အနက်ရောင်အဝတ်အစားတွေကို မမှိန်အောင် ဘယ်လိုလျှော်မလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty အနက်ရောင်အဝတ်အစားတွေကို မမှိန်အောင် ဘယ်လိုလျှော်မလဲ?
အနက်ရောင်အဝတ်အစားတွေကို မမှိန်အောင် ဘယ်လိုလျှော်မလဲ?
လေ့လာမှုတချို့မှာ အနက်ရောင် အဝတ်အစား ဝတ်ဆင်ခြင်းက လူတစ်ယောက်ကို ဉာဏ်ကောင်းပြီး confident ပိုရှိစေနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒိတ်လုပ်တဲ့အခါ ဝတ်ဆင်ဖို့ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အနက်ရောင်အဝတ်အစားတွေဟာ ခဏခဏလျှော်ပါများတဲ့အခါ အရောင်မှိန်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အနက်ရောင်ကို ကြာရှည်ခံပြီး အရောင်စိုနေစေဖို့ ဘယ်လိုလျှော်ရမလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ခဏခဏ မလျှော်ပါနဲ့
တချို့အနက်ရောင်အင်္ကျီတွေက လျှော်ရင် အရောင်အနည်းငယ် ကျွတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ခဏခဏလျှော်ပါများရင် အရောင်မှိန်သွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အနက်ရောင်အဝတ်အစားတွေကို လိုအပ်တဲ့အခါမှသာ လျှော်ခြင်းဖြင့် အရောင်မှိန်ခြင်းကို ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အနက်ရောင် အတွင်းခံတွေ၊ ခြေအိတ်တွေကိုတော့ တစ်ခါဝတ်ပြီးတာနဲ့ လျှော်သင့်ပါတယ်။
အဝတ်တွေကို ခွဲထုတ်တဲ့အခါ အနက်ရောင်အဝတ်အစားတွေကို တစ်ပုံထားပါ။ အဝတ်လျှော်တဲ့အခါ အနက်ရောင်က ဆိုးဆေးကျွတ်ပြီး တခြားအရောင်ဖျော့အဝတ်အစားတွေကို စွန်းစေလို့ပါ။ အဝတ်လျှော်တဲ့အခါ အဝတ်အစားတွေကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး လျှော်ပေးပါ။
၃။ မှန်ကန်တဲ့ ရေအပူချိန်ကိုသုံးပါ
ရေပူက ဆိုးဆေးမှိန်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို အားပေးတာကြောင့် အနက်ရောင်အဝတ်အစားတွေ လျှော်တဲ့အခါ ရေအေးအေးကိုသာ အမြဲတမ်းသုံးပါ။
နေရောင်တိုက်ရိုက်ထဲမှာ လှမ်းခြင်းက အရောင်တွေကို မှိန်စေတာကြောင့် အနက်ရောင်အဝတ်အစားတွေကို အပြင်မှာလှမ်းခြင်းကို ရှောင်ပါ။
ရှာလကာရည်- အဝတ်လျှော်နေတဲ့ rinse cycle အတွင်းမှာ ပေါင်းခံ ရှာလကာရည်အဖြူ ၂၅၀ မီလီကို အဝတ်လျှော်စက် basin ထဲသို့ တိုက်ရိုက် ထည့်လျှော်ပါ။
ဆား- wash cycle အတွင်းမှာ စားပွဲတင်ဆား ၁၂၅ မီလီကို ထည့်လျှော်ပါ။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ – အဝတ်လျှော်စက်ထဲကို မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ၁၂၅မီလီ ထည့်ပြီးလည်း လျှော်နိုင်ပါတယ်။
အနက္ေရာင္အဝတ္အစားေတြကို မမွိန္ေအာင္ ဘယ္လိုေလွ်ာ္မလဲ?
ေလ့လာမႈတခ်ိဳ႕မွာ အနက္ေရာင္ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္ျခင္းက လူတစ္ေယာက္ကို ဉာဏ္ေကာင္းၿပီး confident ပိုရွိေစႏိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒိတ္လုပ္တဲ့အခါ ဝတ္ဆင္ဖို႔ အေကာင္းဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အနက္ေရာင္အဝတ္အစားေတြဟာ ခဏခဏေလွ်ာ္ပါမ်ားတဲ့အခါ အေရာင္မွိန္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အနက္ေရာင္ကို ၾကာရွည္ခံၿပီး အေရာင္စိုေနေစဖို႔ ဘယ္လိုေလွ်ာ္ရမလဲဆိုတာကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
၁။ ခဏခဏ မေလွ်ာ္ပါနဲ႔
တခ်ိဳ႕အနက္ေရာင္အက်ႌေတြက ေလွ်ာ္ရင္ အေရာင္အနည္းငယ္ ကြၽတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ခဏခဏေလွ်ာ္ပါမ်ားရင္ အေရာင္မွိန္သြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အနက္ေရာင္အဝတ္အစားေတြကို လိုအပ္တဲ့အခါမွသာ ေလွ်ာ္ျခင္းျဖင့္ အေရာင္မွိန္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အနက္ေရာင္ အတြင္းခံေတြ၊ ေျခအိတ္ေတြကိုေတာ့ တစ္ခါဝတ္ၿပီးတာနဲ႔ ေလွ်ာ္သင့္ပါတယ္။
အဝတ္ေတြကို ခြဲထုတ္တဲ့အခါ အနက္ေရာင္အဝတ္အစားေတြကို တစ္ပုံထားပါ။ အဝတ္ေလွ်ာ္တဲ့အခါ အနက္ေရာင္က ဆိုးေဆးကြၽတ္ၿပီး တျခားအေရာင္ေဖ်ာ့အဝတ္အစားေတြကို စြန္းေစလို႔ပါ။ အဝတ္ေလွ်ာ္တဲ့အခါ အဝတ္အစားေတြကို ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး ေလွ်ာ္ေပးပါ။
၃။ မွန္ကန္တဲ့ ေရအပူခ်ိန္ကိုသုံးပါ
ေရပူက ဆိုးေဆးမွိန္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကို အားေပးတာေၾကာင့္ အနက္ေရာင္အဝတ္အစားေတြ ေလွ်ာ္တဲ့အခါ ေရေအးေအးကိုသာ အၿမဲတမ္းသုံးပါ။
ေနေရာင္တိုက္႐ိုက္ထဲမွာ လွမ္းျခင္းက အေရာင္ေတြကို မွိန္ေစတာေၾကာင့္ အနက္ေရာင္အဝတ္အစားေတြကို အျပင္မွာလွမ္းျခင္းကို ေရွာင္ပါ။
ရွာလကာရည္- အဝတ္ေလွ်ာ္ေနတဲ့ rinse cycle အတြင္းမွာ ေပါင္းခံ ရွာလကာရည္အျဖဴ ၂၅၀ မီလီကို အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ basin ထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္ ထည့္ေလွ်ာ္ပါ။
ဆား- wash cycle အတြင္းမွာ စားပြဲတင္ဆား ၁၂၅ မီလီကို ထည့္ေလွ်ာ္ပါ။
မုန္႔ဖုတ္ဆိုဒါ – အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲကို မုန္႔ဖုတ္ဆိုဒါ ၁၂၅မီလီ ထည့္ၿပီးလည္း ေလွ်ာ္ႏိုင္ပါတယ္။
Previous articleအသက် ၇၄နှစ်အရွယ်ရောက်မှ အမွှာလေး မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယ အမျိုးသမီးကြီး
Next articleအရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းခြင်းနဲ့ အလှအပကို ပျက်စီးစေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း